Su'aal FSX 747
1 sano 4 bilood ka hor #1033 by lpklem
Ka hor intaanan bilaabin, kudos on Air Force One 747-8I ku darsaday, waa dukumintiga ugu wanaagsan ee ku xiran I soo galay laba su'aalood ee kooxda:
1) Waxaan ogaaday sida loo xakameeyo badhanka jadwalka (kicinta) si aan u celiyo farsamadeeyaha AF1 laakiin xitaa ma heli karo xinjirayaasha 4 si wada jir ah u noqdaan kuwo isku xiga? Taas oo aan aniga kaliya heleynin ugu yaraan 10% dib u dhiska, maahan wax caawimaad ah oo ku socda jidka 6'000ft grrrrr
2) Waxaan haystaa laba nidaam oo kormeer ah, kormeeraha guud wuxuu leeyahay shaashadda caadiga ah ee VC iwm, kan labaad ee aan u isticmaalo aragtida qalabka kala duwan, waxay qaadataa waqti in la sameeyo mar kasta oo aan ciyaaro, waxaan isku dayey inaan badbaadiyo duulimaadka mar kaliya ma badbaadin qaabka labaad ee shaashadda. Talooyin kasta oo la aqbali karo.
Thanks for this site, waan jeclahay!
1 sano 4 bilood ka hor #1034 by Gh0stRider203
Nasiib darro, kama caawin karo inkasta oo taasi noqon laheyd mid xiiso leh. Ma waxaad fursad u heshaa inaad hubiso kooxaha FSX ee FB? Waan ogahay in aan ku jiro dhowr iyo waxay u muuqdaan in ay aqoon u leeyihiin (inta badan waxyaabaha ...... kuwa kale waxay ku saabsan yihiin sida faa'iido leh sida buluug ah ....).
1 sano 4 bilood ka hor #1035 by DRCW
Haa, shaxda FSX ku rakiban tahay heer hoose oo loogu talagalay xayawaanka farxadda iyo qalabka dayuuradaha qaarkood. Laakiin waxaad isku dayi kartaa kuwan soo socda ... Tag bamka iyo furaha muhiimka ah una gaabi qaybta aad ku aragto F2 (Furaha Furaha) Weedho qaybta, oo riix furaha muhiimka ah ee jadwalkaaga. Haddii ay ka jawaabto oo aad aragto isbeddel, badhanka faragelintu wuxuu noqon doonaa furaha dambe. Nasiib wacan
1 sano 4 bilood ka hor #1036 by lpklem
Taasi waa sida aan u doortay badhanka jadwalka si aan u leexsado si kastaba ha ahaatee haddii aan ku celceliyo inaan dib ugu celiyo xuduudda aan ka hor marin 10%, daqiiqada aan ku kordho xayiraadda iyadoo la isticmaalayo xakameynta xeel-dheereynta ee rogroga ah, waxa aad raadineysid isdabajoog ah. Waad ku mahadsan tahay fekerkaaga, waan u mahadsantahey !!!!
1 sano 4 bilood ka hor #1037 by DRCW
Haa, miyaad isku dayday in badan oo riixo badhanka? Waxa ay ii shaqeysay aniga, laakiin waxay ahayd boodh kale oo aan ku ciyaaro. Fikrad kaliya, laakiin FSX waa barnaamij xaddidan aaggaas ..
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.302